Dhammaan wixii ku saabsan barta wararka ee iPhone | Warka IPhone (Bogga 4)
Isbarbar dhiga iPhone 6 iyo Sony Xperia Z2
Waxaan isbarbar dhigayaa iPhone 6 iyo astaamaha aan jeclahay inta badan Android Sony Xperia Z2. Qof kasta oo qiimeeya waxa ay inta badan isticmaalaan, aniga yaab weyn bay iila tahay.
Sidee loo hagaajiyaa batteriga iPhone 6 oo leh iOS 8
Ka fikir inaad ku hagaajin karto waxqabadka batteriga qalabkaaga cusub ciyaar nadiif ah, adigoon rarin kaydinta. Talooyinka qaarkood.
Sida loo qaabeeyo "Wadaagista Qoyska" ee iOS 8
Dejinta En Familia waxay furaysaa adduunyo suurtagal ah markay tahay wadaagista wax iibsigaaga, goobtaada, xakamaynta carruurta yar yar iyo helitaanka iyaga. Sida ugu fudud ee ..
Sida loo rakibo kiiboodhka dhinac saddexaad ee iOS 8
Baro sida loo rakibo kumbuyuutar dhinac saddexaad ah oo ku saabsan iPhone-kaaga oo leh macruufka 8. Sharaxaad tallaabo-tallaabo ah oo lagu rakibayo kiiboodhka SwiftKey.
Sida loo xaliyo dhibaatada Sii-wadashada ama Siri Hands-free
Haddii dhibaato kaa haysato helitaanka wicitaanada adoo adeegsanaya Siri gacmaheeda-la'aan ama astaamaha sii wadida, isku day xalkan ka hor intaadan waalin.
Sida loo dejiyo iCloud Drive-ka iPhone-ka leh iOS 8
Ku rakib iCloud Drive laba talaabo, waa wax fudud oo faa'iido leh in kastoo ay wali u baahan tahay taas isku xidhka qalabka aad leedahay iOS8 iyo OS X Yosemite.
Apple waxay sii deyneysaa hage adeegsade ah iOS 8
Apple waxay soo saartay hage rasmi ah oo loogu talagalay macruufka 8. Waa bilaash oo, hadda, Ingiriis, laakiin aad u xiiso badan, halkan waxaan ku aragnaa Siri iyo VoLTE gacmo-la’aan ah.
Dareenka ugu horreeya ee iPhone 6 iyo iPhone 6 Plus, baytariga, shaashadda iyo faahfaahin kale
Dareenka ugu horreeya ee khubarada teknolojiyada ku saabsan waxyaabaha muhiimka ah ee iphone-yada cusub, nolosha batteriga, xallinta shaashadda, iyo inbadan.
Sida loo kala doorto iPhone 6 iyo iPhone 6 Plus
Ka fikir xulashadaada iPhone-ka adiga oo ku saleynaya sida aad u isticmaali doontid iyo sida ergonomic u u noqon karo gacmahaaga, ka hel dhammaan macluumaadka halkan.
Sidee, xagee iyo intee in le'eg ayaa laga iibinayaa iPhone-kaaga hore
Haddii aad rabto inaad dib u hesho maalgashigaaga oo kaa caawinaya inaad iibsato iPhone-ka cusub, tixgeli inaad iibiso midkii hore, halkan waxaa ku yaal talo soo jeedin ku saabsan geeddi-socodka.
Broadcom wuxuu soo bandhigayaa qalabkiisa 5G, kaas oo bixiya laba jeer xawaaraha WiFi
Broadcom wuxuu awood u siinayaa XNUMXx dhaqso Wi-Fi rogaya iyo hagaajinta isku xirnaanta aaladaha badan ee Bluetooth.
Ku ilaali sawiradaada seddex talaabo oo fudud
Baro seddex dariiqo oo aad uga ilaalin karto sawirradaada qowlaysatada damiir laawayaasha ah, waxaa jira xulashooyin dhammaantood iyo wax walba oo fudud oo la hirgelin karo.
Qalabka danbi baarista loo isticmaalay baaritaanka xatooyada qaawan ee ugu dambeysay
Isku darka labada nooc ee softiweerka la heli karo ayaa abuuray mawjad hacks ah. Waxaan arki doonnaa mid kasta oo ka mid ah qalabkii loo adeegsaday weerarkan.
Elgato waxay soo bandhigeysaa qalabkeeda imaatinka HomeKit
Elgato waxay dooneysaa inay ka mid ahaato otomaatiga guriga ee ku dhawaaqaya imaatinka HomeKit ee iOS8, waana sababta ay ugu dhawaaqday badeecooyin kala duwan oo loo yaqaan Eve.
Sida loo xannibo xayeysiiska ama dadka isticmaala barta twitter-ka iyo sida loo aamusiyo
Baro sida loo xannibo xayeysiiska iyo isticmaaleyaasha barta twitterka iyo waliba sida loo aamusiyo.
Codsiyada xakamaynta biyaha, tayadiisa iyo xaaladaha degdegga ah
Warshadaha biyaha ayaa isku dayaya inay ka faa'iideystaan ​​awooda teknolojiyadda moobiilka iyagoo isku dayaya inay xalal caqli-gal ah u helaan dhibaatooyinka caalamiga ah.
Wax kasta oo aan ka heli karno Aqoonsiga Taabashada ee iOS 8
Aqoonsiga Taabashadu waa magaca dareeraha faraha ee aqoonsiga shakhsiyeed ee Apple. Aynu eegno hagaajinta iOS 8.
Abka qarsoodiga ah mar dambe lama aqoonsana
Benjamin Caudill iyo Bryan Seely waxay ku maareeyeen, iyaga oo adeegsanaya email kale oo isticmaale ah, inay soo bandhigaan qoraaladooda shabakadda aan la aqoon ee Sirta ah.
Haddii IPhone-ka aad heshay uu shaqeynayo, waxaad dalban kartaa qaar ka mid ah tabaha soo socda si aad ula xiriirto milkiilaha waqtiga rikoodhka.
Xaakimka Paulo Cesar de Carvalho ayaa ka codsaday shirkadaha inay ka mamnuucaan barnaamijka qarsoodiga ah meheraddooda, iyo waliba tirtirka fog
Sida sawirro fiican looga qaato iPhone-kaaga
Waxaa jira sawirro badan oo aan soo dhigno shabakadaha bulshada oo runtii cabsi leh, kamana ahan kaamirada ee waa isha sawirka qaadata. Ku hagaaji sawirradaada talooyin kooban.
Walmart waxay iibisaa iPhone 5s $ 79 halka iPhone 5c ay ku iibiso wax ka yar hal doolar
Wallmart waxay iibisaa iPhone 5c wax ka yar hal doolar halka iPhone 5s ay ku iibiso $ 79. Olole dagaal oo lagu tirtirayo wax soo saarka loona diyaariyo kan cusub.
Software la soo saaray oo dardar gelinaya kuleylka isla markaana kordhiya nolosha batteriga
Jahawareerka ka dhasha muddada uu ku sugan yahay baterigeena waxaa kaliya ka sarreysa jahwareerka ka dhashay waqtiga uu ku dhameystirayo lacagta soo socota.
Ku dhaji sawirrada 'Instagram' ee ku jira kombiyuutarkaaga adoo adeegsanaya
Ku dhaji sawirrada aad kombuyuutarkaaga ku haysato ama darawallada adag ee Instagram-kaaga uga soo diro adiga oo adeegsanaya midnimo.
Sida loo hagaajiyo shaashaddaada iPhone 5s
Sida loo beddelo shaashadda iPhone 5s-kaaga guriga iyo qiimaha ugu yar.
iMessage waa adeegga fariimaha ee Apple oo si toos ah ugu xira codsiyada farriimaha ee iPhone iyo iPad. Fariimahani waa bilaash, laakiin way fashilmi karaan.
Sida looga tirtiro iPhone-kaaga kaydadkii hore
Baro sida loo tirtiro nuqullada nuqul ee iPhone ama iPad-kaaga qaab fudud oo fudud, uma baahnid inaad ballaadhiso kaydinta, kaliya maaree.
Barnaamijkan gaarka ah waxaan uga hadlaynaa waxa ku cusub OS X Yosemite
Taarikada iPhone 6 ayaa soo ifaysa, taas oo yeelan lahayd NFC iyo 802.11ac Wifi
Xog cusub oo ka soo baxday ilo Shiineys ah ayaa na tuseysa Motherboard-ka suuragalka ah ee iPhone 6 cusub
Khabiir ayaa codsanaya in albaabada dambe ee iOS ee bixiya macluumaadkayaga Apple iyo dhinacyada saddexaad la xidho
Zdziarski waxay ka codsaneysaa Apple inay ka saarto albaabada dambe ee nidaamka iOS si looga hortago jabsiga xogta shaqsiyadeed ee Apple iyo wakaaladaha dowlada.
Waxaa dhici karta in markii aad xiriir la gasho dalabkaaga Xiriirada iPhone, aysan ka muuqan arjigaaga desktop-ka. Aan xallino tan.
George Hotz, oo loo yaqaan Geohot, wuxuu ku biiray kooxda riyada Google ee tuugada internetka
Google waxay kireysaa Hotz, oo ah calaamadda ugu weyn ee iPhone-ka ee JAILBREAK, loogu talagalay Mashruuceeda 'Zero', iskuday lagu doonayo in lagu abaabulo dadka wax jabsada si Internetka looga dhigo mid amni badan
Makarafoonka tayada sare leh, Rode IXY wuxuu hadda kabilaabayaa isku xirka hillaaca
Rode IXY wuxuu u habeeyay iPhone 5, 5s iyo 5c mar kale wuxuu ku guuleystey suuqa makaroofo tayo sare leh.
Apple ayaa beenisay in adeegga goobta uu ka hortagayo ilaalinta sirta dadka isticmaala Shiinaha
Apple waxay ka jawaabaysaa eedaynta telefishanka dawlada shiinaha ee ah inay ugu yeedhay iphone “khatarta amniga qaranka” adeega goobta uu ku yaal awgood.
Sida loo xaliyo dhibaatada cillad iPhone ee gaariga Bluetooth
Waa wax caadi ah in IPhone-ku uu ku xirnaado Bluetooth-ka gaariga, mid ka mid ah isticmaalka caadiga ah taasna inta badan dhibaato ayaa siisa muusikada.
Orange waxay kubiirtay Deezer si ay uga dhageysato muusikada moobilka adigoon cunin xogta tarifu
Orange waxay macaamiisheeda siisaa 2 bilood oo ah Deezer Premium + bilaash ah iyo 1GB dheeri ah si dhageysiga muusikada uusan u cunin xaddiga xogta.
Sida dib loogala soo wareego barnaamijka Safari
Sida looga soo kabto booska Safari iyadoo la iftiiminayo boos ka soo kabashada taariikhda, cookies iyo liiska akhriska.
Waxay ku bixiyaan $ 15.000 iPhone-ka jiilka koowaad
Ganacsade reer Californian ah ayaa sameeya dahab isagoo iibinaya jiilalka ugu horeeya ee iPhone-ka Apple jecel yahay.
Wareysi: Furitaanka Apple Store ee Sol, oo ay ku hareereysan yihiin xoogaa khilaaf ah
Waxaan wareysanay koox ka mid ah kuwa loo xushay inay ka shaqeeyaan furitaanka Apple Store ee Sol, laakiin markii dambe ay diiday Apple
Sida looga hortago dhageysiga NSA ee taleefankaaga iPhone-ka
Snowden wuxuu ku xaqiijinayaa wareysiga uu siiyay NBC in NSA ay meel fog ka rogi karto taleefankaaga iPhone-ka isla markaana furan karto codsiyada, hubi taariikhda, iwm
Tufaaxa ayaa sameeya muuqaal ah CIYAARTA KA HOR CIYAARTA by Beats
Ku dhawaaqida cusub Ciyaarta ka hor Cayaarta ee Beats soo saartay si kor loogu qaado iibinta SOLO2 iyadoo laga faa'iideysanayo imaatinka Koobka Adduunka ee Kubadda Cagta, iPhone 5s ayaa u muuqda.
Astaan ​​dhalaalaysa oo Apple ah oo dhabarka ugu taal iPhone 6
IPhone 6 wuxuu lahaan karaa astaan ​​dhalaalaya oo Apple ah dhabarka sida ku cad xog kale oo ay heshay MacFixIt Australia, kiiskan daboolka dambe ee 6-inch iPhone 4,7.
Sida Loogu Jawaabo Si Deg Deg Ah Fariimaha Aan Furayn iMessage
Tabobar: waxaan kuu sharraxeynaa sida ugu dhakhsaha badan ee looga jawaabo farriinta iyadoon loo baahnayn in la furo arjiga u dhigma
Hackers waxay iska ilaaliyaan furayaasha hawlgelinta iCloud
Koox burcad ah ayaa ku guuleystey in ay dhaafaan qufulka iCloud oo dadka isticmaala u saamaxaya in ay soo celiyaan iPhone-kii. Iyadoo aan la helin aqoonsikan, qof kastaa wuu soo celin karaa iPhone-ka isaga oo aan lahayn akoonka Apple.
Dib-u-warshadaynta iyo Dib-u-Isticmaalka barnaamijka iPhones ayaa imanaya Apple Store
Maanta barnaamijka dib-u-warshadayntu wuxuu ka bilaabmayaa Apple Store, oo ah barnaamij aqbala iPhone-gaagii hore ama iPad-ka lacag ahaan si loogu bixiyo adeeggaaga cusub. Horumar ku saabsan siyaasadda Apple
Graphene wuxuu noqon karaa hal-abuurka xiga ee Apple
Adduunyada qalabka moobiilku noqonayo mid khafiif ah oo khafiif ah oo wearable-yada la arki karo, graphene wuxuu noqon karaa walxaha mustaqbalka sababo la xiriira astaamahiisa.
Talaabo talaabo ayaan ku sharaxeynaa sida looga saaro geolocation-ka sawiradeena iPhone-ka
Waxaan kuu sharraxeynaa sida loo keydiyo xusuus-qorrada iPhone kombiyuutarkaaga
Signal wuxuu soo bandhigayaa 'RP One' kontorool nooca konsoleerka ee iOS
Calaamadda lagu soo bandhigay shalay CES, qalab cusub oo loo yaqaan 'iOS 7', RP One, oo ah kantaroole buluug ah oo ku jira qaabka caadiga ah ee kontoroolayaasha kontoroolka.
Sida loo ogaado haddii akoonkaaga Snapchat la jabsaday
Waxaan kuu sheegeynaa tillaabooyinka la raaco si loo ogaado haddii akoonkaaga Snapchat la jabsaday
PUSH, jeebka iyo kiiskaaga iPhone-ka
PUSH waa kiis cusub oo loogu talagalay iPhone 5, 5c iyo 5s kaas oo ku haya ilaa 3 kaararka gudaha.
Waxaan bakhtiyaa iPhone 5s ah hadiyad Kirismas ah
Aniga oo ka faa'iideysaneyna xaqiiqda ah in Ciida Kirismaska ​​ay soo dhowdahay, Actualidad iPhone ma dooneyno in aan seegno fursadda aan ku sameyn karno qamaar ...
Trick: Sida loo beddelo muuqaalka saacadaha caalamiga ah ee iOS 7
Waxaan kuu sheegeynaa sida loo beddelo muuqaalka saacadaha caalamiga ah ee iOS 7
Sooyaalkii kirismaska ​​ee ugu fiicnaa iPhone 5 iyo 5s
Sooyaalkii kirismaska ​​ee ugu fiicnaa iPhone 5 iyo 5s.
Casharbarka: Sida loo xannibo bogagga Safari
Waxaan kuu sharxeynaa sida loo xannibo bogagga shabakadda ee Safari si qofna uusan u booqan karin
Honda Civic-kan cusub wuxuu yeelan doonaa shaashad iPhone ku habboon
Jiilka cusub ee Honda waxaa loogu talagalay inuu la falgalo aaladaha iOS, si shaashadaha ku yaal dashboodyada ay u kontoroolaan aaladahayagu.
Khiyaamada: Tilmaamaha kumbuyuutarka ee iOS 7
IOS 7 wuxuu kudarsadaa tuuryo kumbuyuutarrada wireless
Casharbarka: Sida Loogu keydiyo Kaararka Deynta ee iPhone-ka leh iCloud Keychain
Waxaan kuu sharxeynaa sida loo keydiyo kaararka amaahda ee iPhone-ka leh iCloud Keychain
Casharro: Sida loo xakameeyo isticmaalkayaga xogta billaha ah ee FaceTime iyo barnaamijyada kale
Waxaan ku sharxeynaa sida loo xakameeyo isticmaalka bil kasta isticmaalka xogta FaceTime iyo codsiyada kale
IPhone 5s iyo 5c ayaa lagu dayactiri doonaa bakhaarka, wax isbadal ah oo terminal ah lama sameyn doono.
Apple waxay ka warqabtaa waqtiga iyo lacagta keydinta ee ay ku sameyso dayactir qaar "yar" ah oo dukaanka ku jira waxayna ku jirtaa tababar iyo diyaarin bakhaarro si loogu sameeyo iPhone 5s cusub iyo 5c terminal. Dayactir ka hor inta aanad beddelin
Codbixinta Toddobaadka: Miyaad ku isticmaashaa Aqoonsiga Taabashada 'iPhone 5s'?
Waayeelnimo ama hal-abuur ku jira iPhone 5c iyo 5s
Alaabooyinka Apple miyey si ula kac ah u duugoobeen sanad gudihii? Tani waa su'aasha aan weydiinno akhristayaashayada, laga yaabee hal-abuurnimada ay soo bandhigaan inay ka sii cajaa'ib badan tahay badeecadda oo aan uun macaamiil nahay. Aragtidaada ka dhiibo.
Trick: Sida loo joojiyo ku ciyaarida muusikada iphone-kaaga markaad seexaneyso
Khiyaano yar oo ka mid ah macruufka: waxaan kuu sheegaynaa sida loo joojiyo muusikada aad ku garaacayso iPhone-kaaga markii aad seexanayso
Ku guuleysto iPhone 5s leh Actualidad iPhone iyo sanduuqa fekerka
Maanta Actualidad iPhone waxaan ku jirnaa tartan mana ahan kaliya wax tartan ah, maaddaama aan wax walba qallajineyno ...
Afar macruufka 7 khiyaamo ah oo aadan ka ogaan karin
Waxaan ku tusineynaa afarta macruufka ah 7 ee laga yaabo inaadan wali ogayn
IOS 7 waxay kuu ogolaaneysaa inaad ku furto feylal isku duuban qaab '.zip'
Muuqaal cusub oo ka mid ah macruufka 7 ayaa noo oggolaanaya inaan ku furno faylal isku duuban .zip
Fiidiyowgu wuxuu ina tusayaa, sida majaajillada ah, isha dhabta ah ee waxyooneysa markii dib loo qaabeynayo macruufka 7
3 × 28 Podcast ee Actualidad iPhone
3x28 Podcast ee Actualidad iPhone
Bixinta: Dinosaurs Fantastic HD, oo ah encyclopedia heer sare ah oo ku saabsan dinosaurs-ka iPad
Fantastic Dinosaurs HD waa encyclopedia is-dhexgal wanaagsan oo iPad-ka ah oo muujinaya dhammaan macluumaadka ku saabsan abuurkan cajiibka ah si aad u cad oo fudud
Sida loo ogaado haddii iPhone uu xiran yahay IMEI
Waxaan kuu sharxeynaa sida loo ogaado haddii iPhone uu xannibmay IMEI tuugnimo ama lacag-bixin la'aan darteed.
Ku guuleysta iPhone 5 oo leh nacasnimo Me Gru iyo iPhone News
Ku guuleysto 5 GB iPhone 16 mahadnaqida filimka 'Actualidad iPhone'. Ku guuleysigiisa waa mid aad u fudud waxayna kugu qaadan doontaa daqiiqad keliya. Miyaadan rabin iPhone 5 gebi ahaanba bilaash ah?
TomTom, Navigon, Sygic, Copilot ... Keebaa la dooranayaa? Kulankeena waxaad ku leedahay jawaabta
TomTom, Navigon, Sygic, Copilot ... kee doortaa? Kulankeena waxaad ku haysaa jawaabta
Waxaan dib u bilaabi doonaa Madasha Wararka ee iPhone !!
Madasha lagu xalliyo iphone iyo ipad iyo arrimaha kale ee tufaaxa
Sida loo isticmaalo Khariidadaha Google illaa Siri (iyada oo aan Jailbreak lahayn)
Sida loo istcimaalo khariidadaha Google ee leh Siri on your iPhone adiga oo aan u baahnayn Jailbreak ama wax ka beddelid.
Ra'yi uruurinta Todobaadka: Miyay iPhone 5-kaaga la xoqay?
Bixinta: daboolka dambe si loogu beddelo iPhone 4S-kaaga iPhone 5 (@Estudioshops)
Bixinta: daboolka dambe si loogu beddelo iPhone 4S-kaaga iPhone 5
Bixinta: ku beddel iPhone 4S ama 4 midabkaaga bilaash ah iPhone News iyo EstudioShops
Bixinta: ku beddel midabkaaga iPhone 4 bilaash adigoo isticmaalaya Actualidad iPhone iyo EstudioShops
Sidan ayaa IPhone loogu daayay tufaaxa iftiimiyay ee ku guuleystay barbaraha Estudioshops
2 × 06 Podcast ee Actualidad iPhone
Podcast-ka 'Actualidad iPhone' iyo 'Actualidad iPad' halka aan ka hadalno iBooks 2
Ku guuleystayaasha xeerarka xayeysiinta si loo soo dejiyo FileXChange
Waxyar oo dib u dhac ah laakiin waxaan horeyba kuugu soo qaadanay magaca afarta guuleyste ee lambarka xayeysiinta ee ...
White iPhone 4 ayaa qarxa sababa gubashada heerka koowaad ee Talyaaniga (La cusbooneysiiyay)
Warka cajiibka ah ee nooga imanaya talyaaniga, iPhone 4 cadaan ah, oo kaliya 1 bil laga joogo markii la iibsaday, ayaa qarxay ...
Top 50 Waxyaabaha Sameeya IOS5 Cajiib ah
In kasta oo Apple ay ku dhawaaqday in ka badan 200 oo astaamood oo cusub oo ku saabsan nidaamkeeda cusub ee "xiddig" IOS5, intii lagu jiray WWDC ma aysan shaacin ...
News iPhone Jawaab: Jailbreak (1)
In Actualidad iPhone waxaan daneyneynaa akhristayaashayada, sidaa darteed waxaad na weydiin kartaa su'aalahaaga ku saabsan iPhone-kaaga: Cydia, Jailbreak, ...
News iPhone Jawaab
Jailbreak: Weydii Khabiirkeena
In Actualidad iPhone waxaan ku diyaarineynaa daabacaad gaar ah Podcast-ka soo socda 10 ee aan bilaabi doonno maalmo yar gudahood. Waxay noqon doontaa ...
Codsiyada Cydia si loo tixgeliyo.
Bartamihii bishii Janaayo ee sanadkan, Gnzl wuxuu mar hore na tusay, qoraal uu kaga hadlay AppInfo, iyo ...
I tus iPhone-kaaga! #labo
Waxaan soo bandhigeynaa daabacaadda labaad ee qeybta Naga tus iPhone-kaaga! taas oo isticmaale kasta uu noo soo diri karo sawirro ...
IOS 4.3 waxay ka tagtaa iPhone 3G iyo iPod Touch 2G
Haddii aad eegto sawirka kore waxaad ogaan doontaa inay wax maqan yihiin, haa, runtii, ma jiraan wax iOS ah ...
Anteenada cusub ee iPhone 4 CDMA
Waxaan ku arkay Applesfera sawirkan na tusaya laba tusaale oo ah sida anteenada cusub ee iPhone ay u shaqeyn karto ...
White iPhone 4 maaha dhibaatada kamaradda
Ma xasuusataa fiidiyowga aan daabacnay meeshii lagu arkay in taleefanka cad ee iPhone 4 uu dhibaato ka haysto iftiinka ...
Dhaxalka weligiis ah RPG cusub oo ka socda Gameloft, Dib u eegis
Ciyaarta cusub ee Gameloft "Dhaxalka Weligeed ah" waa dhaxalka ciyaarihii Japan ee doorka-ciyaarista (RPG) ee la sameeyay ...
Asphalt 6: Adrenaline, Falanqeyn
Asphalt 6: Adrenaline maahan ciyaartaada caadiga ah ee orodka wixii aan ku arkay tijaabadii aan awooday inaan sameeyo ...
Tababarka fiidiyowga: Kusoo celi qalabka gaarka ah ee loo yaqaan 'baseband 6.15' oo ku hawlgeli SAM (iPhone 3G)
Akhristaheena Pedro wuxuu noo diyaariyay dhowr fiidiyow oo aad ku arki karto talaabo talaabo ah sida loo soo celiyo iPhone-kaaga ...
The White iPhone 4 Dhibaatada Fiidiyowga
Laga soo bilaabo Appleinsider waxaan ka heleynaa fiidiyowgaan oo aad si fiican uga arki karto waxa dhibaatada iPhone 4 ...
Qaab cusub oo loo kiciyo iPhone-ka si loo riixo loona yareeyo isticmaalka batteriga
Hackers Sbingner ayaa hada abuuray codsi loogu talagalay Cydia hab cusub oo lagu kiciyo iPhone-kaaga oo xaliya ...
Gameloft Live Press Dhacdada Video
Galabta waxaan awoodnay inaan ka qeybgalno shir gaar ah oo fiidiyoow ah oo loogu talagalay warbaahinta halkaasoo Gameloft lagu qabtay the
Sida loo hagaajiyo batteriga iyo kuleylka kuleylka Ultrasn0w 1.2 iyo baseband 6.15 (UPDATED)
Sida muuqata isticmaaleyaal badan oo ka mid ah Ultrasn0w 1.2 cusub oo wata baseband 6.15 oo ku jira macruufka 4.2.1 ama iOS 4.1 ayaa dhibaatooyin haysta ...
SOS Caawiyayaashooda loogu talagalay iPhone, aan noqonno kuwa taageera oo aan ka wada dhex qaadno dhammaan, Dib u eegis
Maanta waxaan sameyn doonaa Dib-u-eegis Midnimo ee codsi cusub oo laga bilaabay App Store maalmo yar uun ka hor ...
Skaanka Lacagta x2 (Baaraha Lacagta) ee loogu talagalay iPhone, Dib u eegis iyo PROMO CODES
Shirkadda horumarinta arjiga ee iOS WStudio ayaa nagu soo wargelisay bilowga iyo helitaanka degdegga ah ee App ...
NOVA 2 Tijaabada Gaarka ah, Dib u eegis
Khamiistii la soo dhaafay, mahadnaq martiqaad ka yimid Gameloft, waxaan awoodnay inaan tijaabinno nooc Beta ah oo ay sii daayaan NOVA 2 ee soo socota next.
Mahelaysid e-maylka xaqiijinta ee ah Raadi koontadayda iPhone? Tijaabi tan
Markii aan u socday inaan hagaajiyo xisaabteyda MobileMe si aan u isticmaalo Raadi iPhone-kayga waxaan la kulmay dhibaato la mid ah sida ...
IOS 4.2 JAILBREAK leh Redsn0w 0.9.6b4
Kooxda 'Dev-Team' waxay cusbooneysiisay Redsn0w illaa 0.9.6b4 oo ah nooca loo yaqaan '4.2bXNUMX' si loo sii daayo macruufka XNUMX ee Windows iyo MAC. FIIRO GAAR AH:…
Daboolka ilaalinta dayrta ee Impactband
Haddii aad tahay mid ka mid ah kuwa daadiya taleefankaaga iPhone maalin kasta, waxaad jeclaan doontaa kiiskan, maya ...
Guryaha la wadaago ee Easypiso iyo dadka wada deggan iPhone-ka, Dib u eegid
Shirkadda horumarinta barnaamijka EasyRoommate ayaa ku dhawaaqday inay soo bandhigtay codsigeeda iPhone-ka ee App Store ...
HAMBALYO 9-sano jirkaaga iPod, Taariikh, Falanqeyn, Fiidiyowyo iyo Sawirro, Dib u eegid
Sannadkii 2000, ciyaartoy muusig dijitaal ah ayaa weynaa oo gaabis ahaa ama yaraa oo aan waxtar lahayn dhawr waji ...
Orange Spain horeyba wuu u oggol yahay isku-xidhka
Akhristayaasheenna waxay nagu wargelinayaan in shalay galab ay bilaabeen inay helaan casriyeynta Hababka Howl wadeenada ...
Sahaminta qanacsanaanta ee moobaylka
Shirkad u heellan sameynta sahanno qanciya, JD Power & Associates, malaha shirkadda nuucaan oo kale ah ...
Redsn0w: JAILBREAK loogu talagalay iPhone 3G oo leh macruufka 4.1
Redsn0w ayaa la cusbooneysiiyay si loo xiro macruufka 4.1 ee iPhone 3G iyo iPod touch 2G. Tani…
Sawirada HDR ee kujira iPhone 4
Iyadoo macruufka cusub ee 4.1 la soo bandhigay maanta, kaas oo la heli doono usbuuca soo socda, suurtagalnimada in la sameeyo ...
Ku diyaarso Hotmail-kaaga Push
Laga bilaabo maanta Hotmail wuxuu kaloo la shaqeeyaa ogeysiisyada Riix, waxay ahayd waqtigii Microsoft. Tani waa qaabeynta ay tahay inaad dhigto ...
Resupported4: Codsi loo adeegsado soo saarida fiidiyowga fiilooyin aan asal ahayn (Cydia)
Resupported4 waa codsi cusub oo laga heli karo Cydia kaas oo kuu ogolaanaya inaad ku isticmaasho wax soo saarka fiidiyaha fiilooyin aan ka ahayn ...
Daahfurka iPhone 4 ee Mexico Jimcaha (Ogosto 27)
Labo maalmood gudahood ayaa taleefanka cusub ee Apple laga bilaabay Mexico. Waxaa iibin doona Telcel iyo waliba Movistar, sidoo kale ...
Apple waxay tijaabineysaa qalab aan la aqoon
Laga soo bilaabo Apple Insider waxaan ka helaynaa warka ah in Apple ay tijaabineyso seddex qalab oo cusub, iPod 4,1 oo noqon doona ...
Qeybta cusub ee App Store: «Isku day kahor intaadan iibsan»
Apple waxay u qaybisay dhamaan codsiyada "Lite" qayb cusub oo loogu magac daray "Isku day Intaadan Iibsan." Waxay qaadataa waqti dheer ...
IPhone-ka sidoo kale waxaa laga iibsan karaa bilaash Kanada
IPhone 4 ayaa laga bilaabi doonaa Kanada Jimcaha maanta ah oo ay taariikhdu ku beegan tahay 30, Apple ayaa shaacisay in sidoo kale laga heli doono ...
IPhone 4 waxaa lagu iibin doonaa bilaash dukaanka talyaaniga ee Apple
Apple ayaa hada soo dirtay warbixin cadeynaysa in bisha July 30 keeda iPhone 4 uu imaan doono ...
Saldhigga aasaasiga ah ee iPhone 4 waa hoos loo dhigi karaa
War wanaagsan ayaa u ah dhammaan milkiilayaasha iPhone 4 iyo dhammaan kuwa doonaya inay ku iibsadaan ...
Daahfurka iPhone 4 ee Isbaanishka Luulyo 28
Movistar wuxuu hadda siiyay taariikhda la bilaabayo iPhone 4 cusub iyada oo loo marayo twitter, waxay umuuqataa inay noqon doonto ...
The 100 qaababka cusub ee macruufka 4
Ragga ku jira Appleweblog waxay naftooda u hureen soo uruurinta 100 astaamood oo cusub oo iOS 4 ah oo lagu dhawaaqay ...
Ma rabtaa inaad ogaato Bootrom-kaaga? ih8sn0w wuxuu soo bandhigayaa iDetector
Dhammaan kuwa haysta 3GS oo aan garanayn haddii Bootrom-kaaga uu yahay mid cusub ama kii hore ee ih8sn0w ...
La heli karo Redsn0w 0.9.5b5-3 oo ku habboon Windows
DevTeam ayaa hadda soo saartay nooc cusub oo ah Redsn0w oo la jaan qaada Windows, waa 0.9.5b5-3 Tan ...
Tilmaamaha Apple 27/01 - iBookStore, iWork iyo Codsiyada
Waqtigan xaadirka ah waa markii Jobs uu howlgab noqday oo uu ka tagay qeyb ka mid ah magac weyn Scott Forstall, madaxweyne ku xigeenka ...
SIManager - Cusboonaysii 1.4
Waxaan horeyba idiinkala hadalnay dhowaan arrimaha ku saabsan SIManager, codsi fudud laakiin faa'iido leh oo awood u leh in lagu duubo ...
Hologram ku saabsan iPhone-ka
In kabadan sanad kahor waan diidnay warka iHologram, codsi mabda 'ahaan noo ogolaanaya inaan ku daawano hologram-ka ...
SIManager waa la cusbooneysiiyay
Codsiga Giovanni Chiappini, SIManager, ayaa loo cusbooneysiiyay nooca 1.2. Thanks to SIManager waan soo dejin karnaa, wax ka beddeli karnaa waxna ku dari karnaa ...
The Simpsons Arcade - Hadda waxaa laga heli karaa AppStore
Waxaan horeyba kuugu sheegnay in maalmo gudahood la soo saari doono nooca ciyaartan weyn ee iPhone iyo iPod Touch. Ku dhahaya…
Ku sii wadida wareegayaga boostada ee la xiriira codsiyada ugu sareeya, hadda waa wareegii codsiyada ...
20ka codsi ee ugufiican sida laga soo xigtay MacWorld
Majaladda caanka ah ee MacWorld, oo ay weheliso degelkeeda, ayaa daabacday liistada, sida ay iyagu qabaan, u taagan 20-ka ugu wanaagsan ...
Ku afuuf iPhone-kaaga
Shirkadda Qneo ayaa billowday codsi noo oggolaanaya inaan ku afuufno iphone-keena. Si fiican baad u aqrisay. In kasta oo aysan soo saarin ...
Dib u eegis - HAWX
Sidii aan horeyba ugu sheegnay qoraal kale, halkan waxaan ku soo qaadaneynaa HAWX, oo ka mid ah ciyaarihii aan awoodnay inaan ku lafagurno oo aan tijaabino ...
Dareemayaasha huurka 100% laguma kalsoonaan karo
Dhab ahaantii waa wax aan dhamaanteen ka wada shakisanay, laakiin baaritaanada qaar ayaa xaqiijiya. Dareemayaasha huurka waa dhowr qaybood ...
Dib-u-eegis - Dagaal Casri ah: Duufaan Duufaan
Sidii aan kuugu soo bandhignay in yar uun bil ka hor, Gameloft wuxuu bilaabay Dagaal Casri ah: Sandstorm, ciyaar la dhigay ...
Dib-u-eegid - Saacadda Alarm-ka
Iyada oo Alarm Clock Alarm Clock mar dambe ma lahaan doonno cudurdaar aan ku soo tooso goor dambe. In aad shaqo tagto, inaad ...
Dib-u-eegid - Raadin Fudud
Shirkadda caanka ah ee Farshaxanka Elektiroonigga ah, ka dib markay noo keentay ciyaaro loogu talagalay iPhone / iPod Touch sida Sims 3, waxay soo bandhigaysaa ...
Dib u eegis - Meteor Blitz
Iyada oo koontaroolo siman leh, saameyn muuqaal oo aad u guuleysan iyo qadar sare oo ciyaarta ah, waxaan kuu soo bandhigeynaa dib u eegis dhameystiran ...
Dib-u-eegid - Blad-cadho
Mar labaad, dadka Gameloft waxay naga tageen iyagoo afkeenna furan. Iyada oo leh Caleemaha Cadhada waxay leeyihiin ...
Dib u eegis - iCam (Webcam Video Streaming)
Haddii aan dooneyno inaan u adeegsanno kamarad amni, ilaalin carruurta ama xitaa xayawaan, iCam ayaa noo diyaarsan, ...
Dib u eegis - Gitaarka Rock Tour 2
Markan waxaan kuu soo bandhigeynaa ciyaar si weyn baryahan dambe looga hadlay: Guitar Rock Tour 2. Fikradda…
Dib u eegis - Gene Infinity Gene Infinity
Maanta waa falanqeyn ciyaar ku habsatay qunsuliyadaha iyo kombiyuutarada in ka badan nus ...
Dib u eegis - Knight's Onrush
Kingr's Onrush wuxuu in mudo ah kujiray AppStore-ka, walina waligeen kuguuguma sheegin arintaas. Samee…
Callme 0.8 (OS 3.0) - Cusbooneysiin - Cydia / baraf - iPhone / iPod Touch
CallMe waa codsi shaqadiisu tahay inay awoodaan inay xiriirada aan dooneyno ku dhejino shaashadda iPhone ...
Cluedo loogu talagalay iPhone iyo iPod Touch
Waxaan hadda ku raaxeysan karnaa ciyaarta caadiga ah ee Cluedo on our iPhone / iPod Touch. Shirkadda farshaxanka elektarooniga ah ayaa hadda ku daabacday ...
Muhiimadda dammaanad wanaagsan iyo adeegga iibka kadib
Taariikhahan oo aad ugu dhow soo bandhigida iPhone cusub ku dhowaad dhammaan wararka iyo xanta ayaa udub dhexaad u ah ...
OS 3.0 wuxuu oggol yahay Qoraalada leh Riix
Kuwa idinka mid ah ee isticmaala Me Mobile Me, ogaada in Apple horeyba noogu ogolaatay inaan is waafajino qoraalada aan ku hayno iPhone / iPod Touch ...
Dib u eegid - Qarsoodi NFS
Ka dib markii aan ku tusay horudhac waqti iyo wakhti, waxaad hadda heli kartaa dib-u-eegista ciyaarta weyn ee Loo Baahan Yahay Xawaare: ...
Dib u eegis - Myst
Maalmo ka hor waxaan ka dhawaajinay daahfurka ciyaarta caanka ah ee Myst ee loogu talagalay iPhone / iPod Touch. Hadaad rabto inaad ogaato ...
Ciyaarta - Pick'T Poker
Waxaan dhowaan awoodnay inaan tijaabinno ciyaarta Pick'T Poker, waana inaan qirno taas haddii aad jeceshahay cayaaraha ...
iPhone 2009, sidii la rabay iyo inay ahaato: 3aad.Soomaaliya
Goor dambe laakiin sidii loo balamay, qeybta ugu dambeysa ee sida ay tahay inuu noqdo iPhone 2009. Waxaan qaatay ...
Ciyaar - Ciyaar Kubbadda Cagta
Ciyaarta Baseball, sida magaceeda ka muuqata, waa ciyaar baseball loogu talagalay iPhone / iPod Touch. Miyaad aragtay ...
Ciyaarta - Xakamaynta Duulista
Waxaan maanta soo bandhigeynaa ciyaar aan helnay mid asal ah. Waxaa loo yaqaan Xakamaynta Duulimaadka, waana la heli karaa labadaba ...
Falanqeyn: Tartan mustaqbalka ah oo ka socda iPhone / iPod Touch
Shirkadda Handmark ayaa dhowaan shaacisay inay qorsheyneyso inay soo bandhigto ciyaar tartan mustaqbalka ah oo ay la socoto sawirada ...
IPhone-ka oo ah kaarka kaarka, casinos ayaa ka digaya
Waqti ka waqti waxaa jira warar ama xaalado aad u xiiso badan oo halyeeyada uu yahay iPod ama iPhone, iyo ...
Ciyaarta - Crayon Physics Deluxe
Crayon Physics Deluxe waxay inagu soo dhoweyneysaa adduunka shey fisigiska iyadoo loo marayo muuqaal garaaf ah oo la sameeyay ...
PWnageTool 2.2.5 iyo QuickPwn 2.2.5-2 ee qalabka firmware 2.2.1
Iyada oo loo marayo iphoneHacks waxaan helnay warkan, waxaan hadda u geyn karnaa nooca firmware 2.2.1 oo aan sii wadi karnaa xabsigayaga.
Codsi - Juxtaposer
Juxtaposer wuxuu noo ogolaanayaa inaan isku darno dhowr sawir si aan u abuurno sawirro xiiso leh. Si tan loo sameeyo, waxay hirgelisaa interface aad u fudud oo dareen leh. The…
Ciyaarta - Duulimaadka Hamsters
Dagaalkii Hamsters waa ciyaar cusub oo ay dhiirrigelisay taxanaha xaraashka ah ee loo yaqaan 'Codename: Kids Next Door', oo ay baahiso ...
Codsi - Xusuus Bilaash ah
Xaqiiqdii in kabadan hal jeer ayay nagu dhacday inaan u tagno inaan furno codsi oo aan ogaanno goorta ...
Codsi - SHOUTcast Radio
Waxaa jira waxyaabo kale oo badan oo aad ku dhageysan karto raadiyaha oo ku jira iPhone ama iPod Touch adigoo adeegsanaya internetka. Halkan waxaan horeyba ...
Codsi - iFitness
iFitness waa codsi matalaya nooc tababar shakhsiyeed markay tahay jimicsiga. Barnaamijkan waxaa ka mid ah ...
Codsi - Qari soo wacaha
Qarsoona Wicitaanku shaki la'aan waa codsi xiiso leh, iyo sidoo kale bilaash. Kuwa adeegsada iPhone-ka ...
Ciyaar - Arcade Bowling
Haddii aadan waligaa fursad u helin inaad ku ciyaarto Arcade Bowling nolosha dhabta ah, tani waa fursadaada inaad ...
Ciyaarta - Snezies (Xumbo Buuxsanaan Ciyaar)
Antair Corp waa shirkad aan raadineynin kakanaanta marka ay horumarinayso cayaaraheeda, laakiin waxay raadisaa ...
Hotmail ku saabsan iPhone asal ahaan
Haddii aad leedahay akoon Hotmail ah oo aad rabto inaad kala tashato taleefankaaga iPhone si raaxo leh oo aanad ...
Ciyaarta - Gurguurta!
Ciyaarta nooca Difaaca ee loo yaqaan 'Defense Defense' oo lagu dejiyay cabsida carruurnimada. Waa inaan iska difaacnaa bahallada ku nool gudaha ...
IPhone Community, bulshada isticmaala iPhone News
Maanta waxaan rabnaa inaan soo bandhigno qayb cusub oo ka mid ah taleefannada iPhone News oo dhameystiraya wixii aan horey ugu haysannay ...
Codsi - Quickpic
Hab fudud oo sawiro looga soo dejisan karo iPhone-keena illaa Windows, Linux ama Mac kasta oo Wi-Fi ah. Waxaan fureynaa arjiga, waxaan dooranay sawirka ...
Ciyaarta - Ferrari GT: Evolution
Gameloft wuxuu noo keenayaa ciyaar kale, Ferrari GT: Evolution, halkaas oo aan gadaal uga raaci doonno shaashadda 32 nooc oo Ferrari ah. Waxaan dooran karnaa ...
Kordhinta Volume | Mugga iPhone-kaaga lama sii koobi doono
Macno malahan nooca firmware-ka aad haysato iyo haduu yahay iPhone 2G ama 3G, mugga ...
Codsi - Diiwane Multitrack
Soosaaraha softiweerka Macintosh Sonoma Wire Works ayaa soo saaray cod maqal ah oo cusub oo loogu magac daray FourTrack for…
Codsiga - SpaceTime
Waxay ahayd waqtigii uu soo muuqday xisaabiyaha xisaabeed ee dhabta ah ee iPhone, kani waa kan ugu sarreeya xisaabiyaha ...
Codsi - WiFiFoFum
Iyada oo leh WiFiFoFum, iskaanka ugu fiican ee shabakadda Wi-Fi ee illaa hadda la abuuray ...
Codsiga - iHeartRadio
Dadka isticmaala iPhone / iPod Touch iyo kuwa jecel idaacadaha Mareykanka, waxaa yimaada iHeartRadio. Idaacadaha ay ka mid yihiin ...
Codsi - Toodledo
Toodledo waa maamule hawleed awood badan leh ("To Do's") oo naga caawin doona inaan howlahayaga si habsami leh u abaabulno. Tani…
Codsi - Photogene
Codsiga dhowr isticmaale, waxaan kuu soo bandhigeynaa cashar buuxa oo ku saabsan codsiga Photogene. Waa codsi ah ...
mame4iphone, MAME (ciyaaraha arcade) emulatorka iphone
mame4iphone, tabarucaadkii ugu dambeeyay ee ka yimid saaxiibkeen qaaliga ah Zodttd ayaa hadda laga heli karaa cydia. Iyada oo emulator-kan aad ku ciyaari karto ...
Ciyaar - barkad faneed
Pool Virtual, oo ah ciyaarta adduunka ugu iibinta badan ee jilitaanka bilyaardiga 3D ayaa u yimid iPhone / iPod Touch. Dabcan,…
PwnPlayer, muusigga ugu fiican iphone
Waa kan muuqaalka iyo astaamaha muusigga ugu fiican ee aan ku arkay iphone. Gudaha…
Codsi - Periscope
Periscope waa adeeg gebi ahaanba hal abuur leh, oo loogu talagalay dadka isticmaala iPhone iyo iPod taabashada. Waxay u shaqeysaa oo kaliya qaabka ...
Ciyaarta - Le Frog Brain Challenge
Le Frog Brain Challenge waa xujo caan ah oo caan ah oo gabi ahaanba dib u habeyn lagu sameeyay, qaab aad u soo jiidasho badan leh, sawirro iyo ...
Ciyaar - Kubbadda Cagta Real 2009
Kubadda Cagta Real 2009 ayaa hadda laga heli karaa AppStore. Kuwa jecel kubada cagta, halkan ayaa u imanaya kulankaan cajiibka ah ee ...
Codsiga - dTunes
Isticmaalayaashaas ay Cydia ku rakibeen iPhone-kooda ama iPod Touch waxay ku jiraan nasiib. Codsi ayaa soo baxay, oo la yiraahdo ...
Codsi - Tirin
Tirinta waa codsi noo oggolaanaya inaan la soconno dhammaan taariikhaha aan abuurnay xiisaha leh, ama mudan in la xusuusto. The…
Apple waxay qiraysaa Kane Kramer inuu yahay alifihii iPod-ka isla markaana uusan ku bixin euro
Warkani wuxuu nagu soo gaadhayaa mahadsanid Shekel_c4, oo ah akhriste warka iPhone-ka ah oo noogu soo qoray qaybta tilmaamaha. Qaar badan…
Codsi - Kan sameeyey Beat
Waxaan kuu soo bandhigeynaa Beat Maker. Barnaamij ay soo diyaarisay shirkadda 'Intua', oo ah soo saaraha ugu horreeya ee bixiya codsi muusiko ah ...
Codsi - Isbaanish-Ingiriisi Digaag
Loro Ingiriisi-Isbaanish ah waxaan ku haysan doonnaa taleefannadeenna iPhone / iPod Touch oo ah macallin dhammeeya labada luqadood ee Isbaanishka iyo Ingiriiska. Waxay kakoobantahay liisaska aasaasiga ah ee ereyada ...
Ciyaarta - Asphalt 4: Tartanka Elite
Diyaar u ah inaad soo dhaweyso waxa loo tixgelinayo inay tahay ciyaarta ugu fiican ee tartanka baabuurta ee ...
Codsi - Newton's Cradle
Maanta waxaan soo bandhigeynaa codsi lagu dilo caajiska. Waxaa loo yaqaan 'Newton's Cradle', waxayna ka kooban tahay jilid ka mid ah ...
Codsiga - violin Tiny
Waxaan kuu soo bandhigeynaa maanta dalab ka badan oo xiiso leh. Waxaa loo yaqaan 'Tiny Violin', oo sida aad u aragto, waa jilid ah ...
Codsi - Taabasho CMD
Warkan waxaa loogu talagalay kuwa horeyba u haysta Installer4 BETA on iPhone / iPod Touch. Waxaa laga heli karaa keydka ...
Ciyaar - Bomberman Taabasho
Bomberman Touch waa nooca loo yaqaan 'iPhone / iPod Touch' ee hadda caan ka ah Bomberman nolosha oo dhan. Waqti badan ayey qaadatay since
Ciyaar - Enigmo
Maanta waxaan soo bandhigeynaa ciyaar kacdoon ku ah dadka soo ogaada. Waxaa loo yaqaan Enigmo, waxaana ka digay ...
Midomi - Shazam-ka Cusub, Waa La Wanaajiyay
Codsigan cusub ayaa ah mid ku habboon in lagala wareego Shazam-ka caanka ah. Midomi ma aha oo kaliya wax sax ah isla ...
Tirooyinka IPhone ee wadamada iyo hawl wadeenada
Sachs Global Investment Research waxay daabacaysaa warbixin xiiso leh halkaasoo ay ugu muuqato iibinta iPhone 3G oo ay u kala saareen waddammada iyo shirkadaha ka shaqeeya….
Shil ku yimid codsiyada qaarkood?
Ha baqin, ma ogi inay dhibaato shakhsi tahay ama inay adigana kugu dhacdo laakiin waxaan joogay maalmo yar ...
IPhone 3G badhannada
Halkan waxaad ku haysaa jaantus leh badhamada dibedda ee iPhone 3G, iyo sidoo kale jiilka koowaad ee iPhone si aan ...
Habka ganacsiga ee IPhone 3G
Macaamiil ahaan, IPhone 3G oo ah $ 199 ayaa u muuqda mid wanaagsan, waa cinwaan argagax gelinaya dadweynaha, illaa aad ka ogaato in ...
Ku xakamee iPhone-ka / iPod-ka giraanta iRing
Weligaa ma qiyaaseysaa inaad karti u leedahay inaad xakameyso qaar ka mid ah howlaha iPhone-kaaga adigoo adeegsanaya giraan?
IPhone-ka cusub ee Apple ayaa la jaan qaadi doona inta badan noocyada BMW laga bilaabo maalinta koowaad
BMW waxay ku leedahay bog boggooda internetka iphone-ka cusub waxayna muujineysaa sida ugu wanaagsan ee ay ula shaqeyso inta badan ...
IPhone ku weheliso Linux adoo adeegsanaya amarok
Thanks to adslzone, casharkaan ayaa noo imanaya. Casharradan waxay kuu oggolaaneysaa inaad isku xirto iPhone (waa in la jajabiyaa) iyo Amarok ...
Iphone iibka England, ka hooseeya intii la filayay.
Sida laga soo xigtay waqtiyada dhaqaale, O2 (oo ah shirkad hoosaad taleefan ku leh England) ma aysan gaarin hadafka ah in lagu iibiyo 200,000 iphone ee ...
IPhone wuxuu awoodi doonaa inuu soo diro oo helo MMS dhamaadka bisha SwirlyMMS
Maanta cusbooneysiin cusub oo ku saabsan arjiga SwirlyMMS ayaa soo baxday, taas oo hadda ku dareysa suurtagalnimada dirista ...
IPhone-ka oo kujira buuga internetka ee Movistar
Sida aan u aqrinay AppleWeblog, IPhone-ka waxaa laga heli karaa kaydka rasmiga ah ee Movistar ee internetka. Waxaan hadda galay ...
Fariimaha degdega ah iyo macmiilka IRC ee iPhone
Laba codsi oo kale oo loogu talagalay iPhone. Macaamiil fariin deg deg ah u leh iPhone, gebi ahaanba hooyo, iyo mid kale ...
IPhone Emulator ee Mac
Haddii aad rabto inaad ogaato waxa ay dareemeyso isticmaalka iPhone-ka oo aadan diyaar u ahayn inaad sugto ...
10 arrimood oo qof walbaa uusan ka aqoon iPhone-ka
TuExperto wuxuu daabacaa liistada 10ka shay ee aan qof walba aqoon u laheyn iPhone-ka. Haddii aad raacdo balooggan ...